Kwuru na akwụkwọ nri Keto Slow Kro Slow gị - Akwụghachi ike
Mbido » Book » Kwunye na akwụkwọ nri Keto Slow Kro Slow gị
Na-achọ nnukwu nri nri nri ketogenic ị nwere ike iji kwadebe ngwa nri? Ọ dị mma na anyị nwere ozi ọma maka gị. Enyi anyị Kelsey Ale na-enye Keto Slow Cooker Cookbook ọhụụ maka 500 mmadụ mbụ! Akwukwo akwukwo nri a nwere nri keto nri ụtụtụ, nri ehihie, na nri abalị na-atọ ụtọ!
N'ime Keto Slow Cooker Cookbook, ị ga-enweta nri 80 na-ere ọkụ ngwa ngwa esi nri. Gụnyere n'okpuru bụ ụfọdụ n'ime nnukwu nri na-atọ ụtọ ketogenic nke ị nwere ike ịme.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ntụziaka ndị a niile nwere ike ịme n'okpuru obere oge 15 n'ihi na ha na-eji nwayọ ngwa ngwa. Onye na-esi nri ngwa ngwa na-ewepụ ọtụtụ nchekasị na isi ọwụwa metụtara nri na anyị na-atụ aro ka ị zụta otu ma ọ bụrụ na ịnwebeghị oge a ịchekwa ngwa.
Enyele onyinye pụrụ iche:
Ọ bụrụ na ị nye iwu taa ị ga-enweta onyinye onyinye 3 n'efu! Na mgbakwunye na Keto Slow Cooker Cookbook, ị ga-enweta onyinye 3 ndị a gụnyere usoro gị:
The Ntuziaka Starter…
The Keto Ntuziaka na Shozụ ahịa…
na Atụmatụ Nri nke 7-ụbọchị na Ndepụta Shoppingzụ…
Echela! Jide akwụkwọ gị nke akwụkwọ nri Keto Slow Cooker maka onwe gị taa n'efu! Ihe niile ị ga-akwụ bụ obere ego maka mbufe na njikwa.
Pịa ebe a iji kwupụta akwụkwọ nri gị Keto Slow Cookbook efu
Enweghi osi nri nwayọ nwayọ? Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-esi nri ngwa ngwa dị elu site na Amazon